काठमाडौँ– पूर्व प्रधानमन्त्री तथा समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले नेपाली काँग्रेसका नेता गगन थापालाई जवाफ दिएका छन् । भट्टराईकै गृहजिल्ला गोरखा पुगेर सोमबार गगनले ‘बाबुरामलाई जितायौँ, अब क्षमापूजा गरिन्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
गगनले काँग्रेसकै कारण प्रतिनिधिसभाको चुनाव जितेको बताउँदै गुन विर्सेर बाबुरामले काँग्रेसलाई तथानाम गाली गरेको आरोप लगाएका थिए । बाबुरामले भने गगनलाई ट्वीटरबाट जवाफ फर्काएका छन् ।
गगनकै जवाफका लागि बाबुरामले दुईवटासम्म ट्वीट गरे । पहिलो ट्वीटमा बाबुरामले काँग्रेसले चुनावी तालमेल नबुझेको बताए । चुनावी तालमेल गर्दे रसुवामा नयाँ शक्तिको समर्थनले काँग्रेसले चुनाव जितेको र गोरखामा काँग्रेसको समर्थनले नयाँ शक्तिले चुनाव जितेको बताए ।
उनले लेखेका छन्, 'काँग्रेसका साथीहरूले चुनावी तालमेलको राजनीति बुझ्नु राम्रो होला । गोरखा र रसुवामा नयाँ शक्ति र नेकाबीच तालमेल भएको हो । गोरखा२मा नयाँ शक्ति र रसुवामा नेकाले जितेको हो। नयाँ शक्तिको समर्थनविना नेकाले रसुवामा जित्ने थिएन भन्ने चाहिं किन बिर्सेको ? एकता र विरोध दुवै हुन्छ है लोकतन्त्रमा !’
काँग्रेसका साथीहरूले चुनावी तालमेलको राजनीति बुझ्नु राम्रो होला!गोरखा र रसुवामा नयाँ शक्ति र नेका बीच तालमेल भएको हो!गोरखा२मा नयाँ शक्ति र रसुवामा नेकाले जितेको हो।नयाँ शक्तिको समर्थन विना नेकाले रसुवामा जित्ने थिएन भन्ने चाहिं किन बिर्सेको?एकता र विरोध दुवै हुन्छ है लोकतन्त्रमा! https://t.co/aYuvmtUWk7
— Baburam Bhattarai (@brb1954) June 22, 2019
त्यसैगरी बाबुरामले सोमबार अर्को पनि ट्वीट गर्दै जवाफ दिए । काँग्रेसलाई बाबुरामले अपहरित बीपीको रक्षा गर्न सुझाव दिएका छन् । बिपीको रक्षा गर, बाबुरामको क्षमा पूजा पछि गरौंला भन्दै बाबुरामले व्यङ्ग्य गरे ।
लेखेका छन्, ‘बिपीलाई अब राप्रपाले अपहरण गरेछ । बीपीले एउटा विशिष्ट क्षणमा अपनाएको मेलमिलापको कार्यनीतिलाई काँग्रेसले रणनीति र आदर्श बनाएपछि राप्रपा हौसिने नै भयो । बिपीको आत्माले के भन्दै होला ? कांग्रेसी मित्रहरू हो, पहिले अपहरित बीपीको रक्षा त गर, बाबुरामको क्षमापूजा पछि गरौला । हामी साथदिन तयार छौं ।’
बिपीलाई अब राप्रपाले अपहरण गरेछ!बीपीले एउटा विशिष्ट क्षणमा अपनाएको मेलमिलापको कार्यनीतिलाई कांग्रेसले रणनीति र आदर्श बनाएपछि राप्रपा हौसिने नै भयो!बिपीको आत्माले के भन्दै होला?कांग्रेसी मित्रहरू हो,पहिले अपहरित बिपीको रक्षा त गर,बाबुरामको क्षमापूजा पछि गरौला!हामी साथदिन तयार छौं! https://t.co/2s6tfgJLdp
— Baburam Bhattarai (@brb1954) June 23, 2019